बिहे गरेको भोली पल्ट देखी कुटन सुरु ! सुहागरातको दिन रक्सीले फिटान,३ महिनापछि यस्तो हालत-भिडियो हेर्नुहोस:: Naya Nepal
बिहे गरेको भोली पल्ट देखी कुटन सुरु ! सुहागरातको दिन रक्सीले फिटान,३ महिनापछि यस्तो हालत-भिडियो हेर्नुहोस
दार्चुला, १० असोज । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५० गुल्म बाह्रैमास व्यास गाउँपालिका–१ छांगरुमै बस्ने भएको छ । स्थायीरुपमा संरचना निर्माण नभए पनि अहिलेलाई भाडाकै घरमा सशस्त्र प्रहरी बाह्रैमास छांगरुमै बस्ने भएको हो ।
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ,पुरा हेर्नुहोला ।